Huawei Watch 3 iyo FreeBuds 4, oo ku sharxaya dhamaadka-sare ee dharka la xidhan karo | Wararka Gadget
Miguel Hernández | 02/06/2021 19:25 | General, Noticias
Shirkadda Aasiya waxay sameysay bandhig caalami ah kaas oo noo ogolaaday inaan eegno horudhac ah wararka imaan doona rubuca soo socda. Dhawaan waxaan fursad u heli doonnaa inaan kuu soo qaadano falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan aaladahaan oo dhan, inta ka horeysana waxaan kuu sheegi doonaa waxa warkoodu yahay.
Huawei wuxuu suuqa u rogaa dhinaca cusub ee Huawei Watch 3 iyo Watch 3 Pro oo ay weheliso dhawaqa ugu fiican oo leh aaladaha dhegaha ee TWS FreeBuds 4. Aynu aragno waxa dhammaan horumarineed ee ay Huawei ku ballanqaadayso qalabkeeda cusub ay ka kooban tahay iyo haddii ay runtii mudan tahay in lagu sharfo dhammaan wararkaas.
1 Huawei Watch 3 iyo Watch 3 Pro
Huawei Watch 3 iyo Watch 3 Pro
Waxaan ku bilaabaynaa saacadda cusub ee ka socota shirkadda Aasiya, waxay qaadatay naqshad wareegsan oo leh waxyar ka sii nadiifsan dhismaha. Way sii socon doontaa inay lasocoto badhan farsamo, in kastoo markan ay kujireen "taaj" wareegsan oo noo ogolaanaya inaan la falgalno HarmonyOS 2 sida Nidaamka Hawlgalka. Labaduba waxay soo saari doonaan guddi 1,43 ″ AMOLED oo leh 1000 nits, halka nooca "Pro" uu yeelan doono crystal safayr.
Hi6262 wuxuu ahaan doonaa processor-ka daryeela shaqada oo ay weheliso 2 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo wadarta keydinta ah. Waxaan lahaan doonaa isku xirnaanta 4G iyada oo loo marayo eSIM, kormeerka garaaca wadnaha, dareeraha oksijiinta dhiigga, WiFi, Bluetooth 5.2 iyo dabcan NFC. Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan dib u eegno xudduudo badan, iyo sidoo kale inaan raacno tababbarkayaga iyadoo loo marayo GPS, oo noqon doona laba wado marka laga hadlayo nooca Pro-ka.
Jiilka afraad ee sameecadaha dhagaha ugu caansan ee shirkaduhu waxay ku yimaadaan midab xiiso leh iyo kiis lacag bixin oo aad loo garan karo. Huawei hadda waxay ka dhigtay kuwo is haysta, fudud oo aragti ahaan ka awood badan. Waxay ku siin doonaan isku xirnaanta Bluetooth 5.2 iyo batari 30 mAh oo loogu talagalay dhagaha dhagaha oo leh 410 mAh kiiska lacag bixinta.
Sidan ayaan ku yeelan doonnaa 4 saacadood oo madax-bannaanida dhagaha maqalka iyo 20 saacadood oo dheeri ah kiiska. Waxaan ku xiri karnaa laba aaladood isla mar ahaantaana waxaan uga mahadcelineynaa isku xirnaanta labada xiriir oo keliya 90 ms oo daahitaan ah. Hadda waxaad leedahay a Ka-noqoshada Sawaxanka Firfircoon ee aadka u xoog badan illaa 25 dB in kasta oo aan lahayn aalado go'doomin ah. Waxay sidoo kale dhaxashaa shaqeynta FreeBuds 3 iyo isku xirkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Huawei Watch 3 iyo FreeBuds 4, oo ku sharxaya dhamaadka sare ee dharka la gashado
Hoover H-Sifeeyaha 700, dib-u-eegista hawo-sifeeyaha ballaaran